October 25, 2012 – democracy for burma
Rohingyas-“Jehad is the only solution”
On October 25, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
BRAINWASHED BY FASCIST LEADERS,TARNED AS RELIGIOUS LEADERS
TRUTH OUT!! 800 Houses of Pauk Taw,burn down by illegal immigrants from Bangladesh, Bangelis Muslim
On October 25, 2012 October 25, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Eight Hundred houses of Pauk Taw,asmall town of
Northern Rakhine State, Myanmar, were burn down
by illegal immigrants from Bangladesh, Bangellis Muslim,
at 3:15 p.m., October 25, 2012. Illegal immigrants
Bangelis Muslims used to practice such “hit and run
technique” to manipulate the world medias that
“people of Myanmar are burning their houses and killing
၃း၁၅ အချိန်..လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ပေါက်တောပေါက်တောတွင် အိမ်ခြေ ၈၀၀ ပြာကျပေါက်တောမြို့တွင် ဘင်္ဂါလီများ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မီးရှို့သဖြင့် ရပ်ကွက်သုံးခုမှ အိမ်ခြေပေါင်း ၈၀၀ကျော် ပြာကျသွားပြီဖြစ်ပြီး မီးရှို့မှု နာရီဝက်ခန့် အကြာတွင် ယင်းသို့ ပြာကျသွ
ားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံဆက် သွယ်မေးမြန်းချက် အရသိရှိရသည်။ဘင်္ဂါလီများ နေရာ အနှံကို တပြိုင်နက် မီးရှို့ပြီး ထွက်ပြေးသွား၍ ယင်းသို့လျင်မြန် ပြာကျသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းတို့ထံမှ သိရှိရသည်။
DVB.IRRAWADDY ,BBC ARE SUPPORTING ROHINGYAS ISSUE -WHAT FOR ? MONEY?
10 Arakanese have been killed in an Goverment army crackdown on the fresh violence across Arakan state
Sittwe: At least 10 Arakanese have been killed in an army crackdown on the fresh violence across Arakan state, according to relatives of the deceased.
According local sources, some Arakanese were killed by army in the violence of Yin The village and Pa Rim villages in Mrauk U Township on 23 and 24 October.
ရသေ့တောင်တွင် စစ်တပ်က ပစ်ခတ်၍ ၂ဦးသေ၊ ၉ ဦးဒဏ်ရာရ
သတင်း — October 25, 2012 at 12:53 pm
ထွန်းထွန်းရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် မူစဲကမ်းအတွင်း ဘင်္ဂလီ မွတ်ဆလင်များနှင့် တိုက်ခိုက်နေကြသော လူအုပ်ထဲကို စစ်တပ်မှ ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်သဖြင့် ရခိုင် ၂ ဦး သေဆုံးပြီး ၉ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိသွားကြောင်း လူနာများကို ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်နေသည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
“ နှစ်ဦးပွဲချင်းပီ သေပါတယ်။ ၉ ဦးဒဏ်ရာ ရပါတယ်။ အခု လူနာ ၉ ဦးက စစ်တွေ ဆေးရုံကို ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အမျိုးသမီးက ပြောသည်။
သေဆုံးသူများမှာ ကျွန်းကြီးကျေးရွာမှ ဦးသိန်းလှမောင်နှင့် နောက်တစ်ဦးမှာ ကံချောင်းကျေးရွာမှ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ အခု ကျွန်မ သိရတာက စစ်တပ်က လမ်းက ဖြတ်ပြီး ပစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ မိုးပေါ်ကို ခြောက်လှန့် ပစ်ခတ်မျိုး မဟုတ်ဘဲ လူအုပ်ထဲကို တည့်တည့်ပစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခု အခြေအနေက တော်တော်ဆိုးရွားနေပါတယ်” ဟု သူမက ပြောသည်။
ညောင်ပင်ကြီး မွတ်ဆလင် ရွာအနီးတွင် လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် စောင့်နေသော စစ်တပ်က ယမန်နေ့ (အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့) ညနေက တိုက်ခိုက်ကြရန် စုဝေးနေသော လူအုပ်ကြီးကို ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
နောက်ဆုံး အခြေအနေကို မေးကြည့်ရာ အမျိုးသမီးက ဆက်ပြီး “ နောက်ဆုံး အခြေအနေက စစ်တပ်က ခုမိုးပေါ်ကိုထောင် ပစ်တာမရှိဘူး။ လူအုပ်ထဲကို တည့်တည့်ချိန်ပြီး တော့ ရေတွက်မရအောင် ဖြိုပစ်နေပါတယ်။ ဒါတော်တော် ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ ထိန်းသိမ်းမူ တခုဖြစ်နေပါတယ် ” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါဒေသအတွင်း ရခိုင်ရွာများဖြစ်သည့် ဆားပြင်ကြီး၊ ကျွန်းကြီးရွာ၊ ကြက်ရိုးဆိပ်ရွာ၊ ညောင်ပင်လည်၊ ပန် ဇင်းမောင်ရွာ၊ ရွာကြီးမြောက်ရွာ၊ ကန်ချောင်းရွာနှင့် ဘင်္ဂလီရွာများ ဖြစ်သည့် အနောက်ပြင်ရွာနှင့် ညောင်ပင်ကြီး ကျေးရွာတို့ရှိသည် ဟုသိရသည်။
ယခုအခါ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ဘင်္ဂလီ မွတ်ဆလင် အဓိဂရုဏ်းမှာ တမြို့နယ်ပီး တမြို့နယ် ကူးစက်ပျံ့ပွားနေပြီး တိုက်ခိုက်မူများ မြို့နယ် တချို့တွင် ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။
ဆူးလေတွင် ရခိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများ ဆန္ဒ Monks Protest-Pics_Video
photo credit Voice weekly Burma VJ media network
ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ ရခိုင်ဘုန်းတော်ကြီး များနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ သေဆုံးသွားသူများအတွက် မေတ္တာပို့ အမျှဝေမှုကို အောက်တိုဘာ လ ၂၄ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန့်က ဆူးလေဘုရား အနီးရှိ မြို့တော် ခန်းမရှေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရစဉ်။